ပုဂံခေတ်မတိုင်မှီမြန်မာနိုင်ငံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Myanmars’ Migration history into Burma
ပုဂံခေတ်မတိုင်မှီမြန်မာနိုင်ငံ (Myanmar Online Encyclopedia)
တရုတ် မှတ်တမ်းဟောင်း များ ၏ အဆို အရ_
မြန်မာလူမျိုးများ သည် တရုတ်ပြည် အနောက် မြောက် ကန်ဆူ နယ် တွင် နေထိုင်ကြသည်။
တ ရုတ် က ဖိသဖြင့် တိဗက် ကုန်းမြင့် ဒေသ တဝိုက် သို့ ပြောင်းသွားကြသည်။
တိဗက်တို့ က မောင်းထုတ် သဖြင့် ယူူနန်နယ် သို့ပြောင်းကြ သည်။
နန်ချို ထိုင်း ရှမ်း များ ၏ လက် အောက် တွင် နေ ထိုင် ရာမှ ထိုင်းရှမ်း တို့၏ ဖိနှိပ်မှု အား မခံနိုင် သ ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း သို့ဝင် ရောက်လာကြသည်။
ပျူ လူမျိုး များ နှင့် ရော ထွေး နေ ထိုင်ရာ မှ ရာစုနှစ် အနည်းငယ် ခန့်အတွင်း ပျူ လူမျိုး များ နှင့် သွေးရောနှော သွားကြပြီး လူမျိုး ကြီး နှစ်မျိုး ပေါင်း စပ် လိုက်ကြသည်။
ကိုးရာစု နှင့် ဆယ်ရာစုခန့်လောက်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသ အား စည်းလုံးသိမ်းသွင်းပြီး ပုဂံပြည် နှင့် ပုဂံမင်းဆက် ကို စတင် တည် ထောင်လေသည်။
ထို အချိန် တွင် ယူနန် နယ် တွင် အင်အား ကြီးမား လာသည့် ထိုင်းရှမ်းများသည်ပြည်နယ်ကြီး ၆ ခုကို နန်ချို နိုင်ငံ အဖြစ် ပထမဆုံး သိမ်းသွင်း နေသည့် ကာလ ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုး များသည် ယူနန်နယ် တွင် နန်ချို ထိုင်း ရှမ်း များ နှင့် နှစ် အတန်ကြာ နေ ထိုင် လာ ခဲ့ကြ သည် ဟု ယူ ဆ ရ သည်။
တရုတ် ရာဇဝင် ဆရာ ကြီး ဖန်ချုံ ၏ မှတ် တမ်း ၌ ၎င်းတို့၏ အကြီး အကဲ အား မင်း ဟု ခေါ် ဝေါ် ကြောင်း ထိုင်း ရှမ်း များ က စောမင်း ဟု ခေါ် ဝေါ် ကြောင်း ရေးသား ထား သည် ယင်း သို့နန်ချို ထိုင်း ရှမ်း များ ၏ လက် အောက် တွင် နေ ထိုင် ရာမှ ထိုင်းရှမ်း တို့၏ ဖိနှိပ်မှု အား မခံနိုင် သ ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း သို့ဝင် ရောက်လာကြသည်။
အာရှ တိုက် ဆိုင်ရာ ဘာသာဝေါ ဟာရ ပညာရှင် များ က မြန်မာလူမျိုး များသည် အရှေ့ တိဗက် ဘာသာ ဝေါ ဟာရ အုပ်စု ဝင်လူမျိုး တမျိုးဖြစ် သည် ဟု အတည်ပြုထားကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း နှင့် ပတ်သက် ၍ အကြား အမြင်များ သည့်သမိုင်းဆရာ ဂေါ်ဒွင်လုစ် ၏ အဆိုအရ မြန်မာများသည် ရှေးဦး စွာ ကျောက်ဆည်နယ် သို့ဝင် ရောက် လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း သို့ပြန့် နှံ့သွားသည် ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာတို့ရာစုနှစ် အ နည်းငယ် အတွင်း အခြေ စိုက် နိုင်ခြင်း မှာ မြန်မာ တို့၏ အစွန်း အစ အပြင် ထို အချိန်ကာလ တွင် နန်ချို ထိုင်းရှမ်း တု့ိ ၏ တိုက် ခိုက် ဖျက်ဆီးခြင်း ကို ခံလိုက်ရပြီး ၊ တိုင်းပျက်ပြည်ပျက် နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ပျက်သုဉ်းယုံသာ မကကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း များပါ ပျက် ပြားပြီး ရပ်တည်ရာ မရ ကစင့် ကလျား ဖြစ်နေသည့် ပျူ လူမျိုး များ နှင့် ရော ထွေး နေ ထိုင်ရာ မှ ရာစုနှစ် အနည်းငယ် ခန့်အတွင်း ပျူ လူမျိုး များ နှင့် သွေးရောနှော သွားကြပြီး လူမျိုး ကြီး နှစ်မျိုး ပေါင်း စပ် လိုက်ကြသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ကာကွယ်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု စသည် ဖြင့် အစစ အရာရာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ကိုးရာစု နှင့် ဆယ်ရာစုခန့်လောက်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသ အား စည်းလုံးသိမ်းသွင်းပြီး ပုဂံပြည် နှင့် ပုဂံမင်းဆက် ကို စတင် တည် ထောင်လေသည်။
Pathy and Panthays were recorded before first Bama Pagan Empire of AD 1044
U Aung Tin shared ပသီလူမျိုးဆိုတာ
ပသီဆိုတာပြည်မြန်မာမှာ လူမျိုး ခြောက်မျိုးဘဲဖေါ်ပြနိုင်တဲ့အချိန် ၁၀၄၄ ခုနှစ်မတိုင်ခင်ထဲက ကျောက်စာဝင်လူမျိုးဖြစ်တယ်။
ပသီအစ ပုဂံကဟု ဆိုရပါတော့မည်။အေဒီ(၇)ရာစုမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသော အာရဗ်လူမျိုးများ၊ပါရှန်နှင့် တူရကီနွယ်ဝင် တာတာများကို ပေါင်းစု၍ ပသီလူမျိုးစုအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာရသည်။ယင်းတို့အနက်အများစုမှာပါရှန်(အီရန်နိုင်ငံသား) များဖြစ်ကြပြီး ဖာရစီဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြသည်။ဖာရစီမှ ပါရ်သီ=ပသီဟူ၍ ရွေ့လျှောတွင်ကျန်ရစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အစ္စလာမ်သာသနာဝင် မွတ်စလင်များ ဖြစ်ကြကုန်၏။ယင်းပသီများကဲ့သို့ တရုတ်လူမျိုးအစ္စလာမ်သာသနာဝင်များလည်း ပုဂံခေတ်ကတည်းက ရှိနေပြီဖြစ်‌ကြောင်း သိရသည်။၎င်းတို့ကိုမှု ပန်းသေး လူမျိုးစုအဖြစ်တွေ့ရသည်။ယင်းပသီနှင့်ပန်းသေးလူမျိုးစုများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပုဂံခေတ်မတိုင်မီကတည်းက ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့ ကြသည်ဖြစ်၍ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများတွင် ဖေါ်ပြပါရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
(၅၈၅)ခုနှစ်ထိုး မင်းအနန္တသူ (လေးမျက်နှာဘုရား)
“ပုဂံခေတ်ကျောက်စာအချို့တွင်”-“ပန်သိယ်” “ပသည်”ဟု ရေးထားသဖြင့် ပုဂံခေတ်ကပင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ရှိ့လိမ့်မည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။”
Please kindly read my well researched article in English Wikipedia. (With irrefutable references) In the early Bagan era (AD 652-660), Arab Muslim merchants landed at ports such as Thaton and Martaban. Arab Muslim ships sailed from Madagascar to China, often going in and out of Burma. Arab travellers visited the Andaman Islands in the Bay of Bengal south of Burma. The Muslims arrived in Burma’s Ayeyarwady River delta, on the Tanintharyi coast and in Rakhine in the 9th century, prior to the establishment of the first Burmese empire in 1055 AD by King Anawrahta of Bagan. @ https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Myanmar
The sea posts of Burma such as Kyaukpyu, Bassein, Syriam, Martaban, Mergui, etc. are rife with the legendary accounts of early shipwrecks in their neighbourhood: of Kular shipwrecked sailors, traders and soldiers. Ref: The coming of Islam to Burma down to 1700 AD by Ba Shin. p.52. The Bulletin of Burma Historical Research Commission 3, 1963. He referred to (1) History of Mons (Burmese) Maung Naw, Retired Sitke, Kyakhto pp 76-82 (2) Shwemawdaw Thamaing (in Burmese) pp 81.
These early Muslim settlements and the propagation of Islam were documented by Arab, Persian, European and Chinese travelers of the 9th century. Burmese Muslims are the descendants of Muslim peoples who settled and intermarried with the local Burmese ethnic groups. Muslims arrived in Burma as traders or settlers, military personnel, and prisoners of war, refugees, and as victims of slavery. However, many early Muslims also as saying goes held positions of status as royal advisers, royal administrators, port authorities, mayors, and traditional medicine men.
One Response to “ပုဂံခေတ်မတိုင်မှီမြန်မာနိုင်ငံ”
January 3, 2017 at 9:02 am | Reply
ကိုင္းးး အာ့ဆို ငါ ေရးျပမယ္…
ေစာင္ဗမာဆိုတာ ( ငါလည္းေစာင္ဗမာဖဲ )
ပ်ဴစစ္ရင္ ဗမာ ဘာညာနဲ႔ အတင္းကာေရာ ကြကို
မြန္ခမာ စပ္သလိုလို တိဘက္တိုဘားမင္းလိုလို
မြန္လို ရခိုင္လို တလိုင္းလို ျမစ္ေျခလွခ်ည့္ မရွိဘူးး
မြန္ဆီက ရွင္အရဟံသာ ေရာက္မလာရင္
အခုအခ်ိန္အထိ မီး နဂါး နဲ႔ နတ္ကိုးကြယ္သူေတြ ျဖစ္ေနမွာ
အေနာ္ရထာဘုရင္သာ နတ္ေလွာင္ေက်ာင္း မလုပ္ခဲ့ရင္
အရည္း သာသနာကို ထိုးစစ္မဆင္နိုင္ခဲ့ရင္
အမွန္ေတာ့ ေသာက္စကားမ်ားတဲ့ ေသာက္က်င့္က
သမိုင္းတိုင္းကို လိုရာ ဆြဲေရးး ခဲ့လို႔ပဲ